Zon'ny mpamorona sy ny revolisiona frantsay | Martech Zone
Zon'ny mpamorona sy ny revolisiona frantsay
Alahady, Novambra 19, 2006 Alatsinainy Janoary 25, 2010 Douglas Karr
Sary avy amin'i ©Ny foiben'i Guillotine
Seth fanehoan-kevitra momba ny zon'ny mpamorona sy ny kopian'ny kopia misy ny ady vaovao indrindra eo amin'ny MPAA sy orinasa iray izay mandefa sarimihetsika amin'ny IPods. Ity ny Revolisiona frantsay indray… nilalao tamin'ny Internet. Sahirana ny RIAA (King Louis) sy ny MPAA (Marie Antoinette). Ny orinasan'izy ireo (The Bastille) dia iharan'ny herisetra (amin'ny Internet) ary ho very loha izy ireo amin'ny farany. Raha tokony hanokatra varavarana mankany amin'ny demokrasia izy ireo dia aleon'izy ireo “mamela antsika hihinana mofomamy” ary hanohy hanohana ny fitomboan'ny harem-pirenena sy ny fibaikoana ny indostrian'ny fialamboly.
Ny revolisiona frantsay (1789â ?? 1799) dia vanim-potoana lehibe teo amin'ny tantaran'ny sivilizasiôna frantsay, eropeana ary tandrefana. Nandritra io fotoana io, ny repoblika dia nanolo ny fanjakan'ny mpanjaka tanteraka tany Frantsa, ary ny fiangonana katolika romana tao an-toerana dia noterena hanao fanovana ifotony. Raha nifindra tany amin'ny repoblika, ny empira ary ny mpanjaka i Frantsa nandritra ny 75 taona taorian'ny nianjeran'ny Repoblika voalohany tamin'ny fanonganam-panjakana, ny Revolisiona dia hita fa teboka iray lehibe nanovana ny tantaran'ny demokrasia tandrefana ?? hatrizay absolutism sy aristocracy, hatramin'ny vanim-potoanan'ny olom-pirenena ho hery politika matanjaka - Wikipedia
Ho very ny lohany ny Lords (Mpanatanteraka indostrian'ny fialamboly), na firy na firy ireo mpisolovava (vassal) antsoin'izy ireo amin'ny vahoaka. Hianjera amin'ny aristokrasia ny lelany, tsy azo ihodivirana. Heveriko fa ny hany fiarovan-dry zareo tavela dia ny manenjika ny denaria farany isaky ny tantsaha farany mba hiezaka hitazona ny fiarahamonina feudal amin'ny fahaiza-mandanjalanja izay hitazonana ny fomba fiainany manjaka.
I Louis sy i Marie dia nahatanteraka ny nanjo azy ireo satria tsy nisy fomba fijoroan'ny vahoaka ho azy ireo. Matahotra aho fa ny RIAA sy ny MPAA dia ao anatin'ny toe-javatra mitovy. Raha tsy misy ny fanohanan'ny vahoaka dia tsy hipetraka sy hihinana mofomamy intsony izahay. Ho rava ny fanjakana.
Aorian'ny eritreritra: tsy manohitra ny mpitendry zavamaniry ahazo vola be aho… Ankasitrahako ny talentan'izy ireo ary fantatro fa miasa mafy izy ireo. Fantatra tokoa fa ny mpitendry mozika dia manao izay tsy an-dalambe amin'ny ankamaroan'ny karamany fa tsy mizara ny asany. Eo no miova ny indostria… ary manomboka manamarika ireo mpanakanto. Betsaka no mizara ny mozikany an-tserasera maimaim-poana na koa manao toy ny orinasan-dry zareo manokana. Ity no hoavin'ny indostria.
Endri-tsoratry ny mpitety tranonkala izay mety hitondra ny tsena!